I-WWF kunye nephulo layo "Siphefumla oko sikuthengayo" | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ibhrashi yamazinyo apho i-bristles yimithi nalapho iintlobo zezinto ezisengozini zivela khona ukusibonisa ngendlela engummangaliso eyona njongo iphambili yeli phulo lokwazisa abantu ukuba into esiyiphefumlayo yile nto siyithengayo.
Ezo bristles ziguqulwe zaba yimithi ehlathini etshisayo kwaye izise ngaphambili ingxaki ekhoyo e-Indonesia kunye namahlathi asePalma atshabalaliswayo, oko kuthetha ukuba iintlobo ezithile, ezinje ngeechimpanzee, ziyasokola kuyo. Iphulo le-WWF, umbutho omkhulu wolondolozo oluzimeleyo emhlabeni.
Ukwanga apho loo mascara ebomvu ijika ibe ziifowuni ezinomsindo batshisa onke amahlathi kwaye oko kubangela ukuba iintlobo ezithile zibe semngciphekweni wokuphela kwaye sinokubona umzekelo we-chimpanzee ephethe umntwana wakhe omncinci ezandleni zakhe.
Okanye loo pizza apho le mozzarella itshizi yolulwe khona fumana enye itshimpanzi phakathi kwemisonto yayo iphantse yazitshisa phambi komlilo okhankanywe ngentla wemifanekiso yangaphambili eyaziyo ukuba nefuthe elaneleyo ukubonisa ukuba obu bungxowankulu kunye nokuthanda ukuthenga buwutshisa ngokupheleleyo umhlaba.
Imizekelo emithathu esikhokelela kuyo umnxeba owenziwe ngulo mbutho kwihlabathi ukuze liqonde ukuba kubandakanya ntoni oku kubathengi. Ukusukela iphepha Behance Ungasondela kwinkqubo yokuyila nganye yale mizekeliso kunye nee-GIF zoopopayi ezivela kubo.
Inedatha ebaluleke kakhulu enjeya I-68% yeoyile yesundu evunwayo iya ngqo kukutya okuthandayo. Imveliso yeoyile yesundu ngoyena nobangela wokutshatyalaliswa kwamahlathi eIndonesia. Kuyakhuthazwa ke ukuba bacenge iinkampani ukuba zisebenzise ioyile yesundu ezinzileyo, eya kuthi ikhokelele ekuvuseleleni indawo yeetshimpanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » "Siphefumla into esiyithengayo", iphulo elitsha leWWF elinemifanekiso emithathu egxile kwioyile yesundu